စူပါ festive Facebook အားလပ်ရက်ပြိုင်ပွဲအတွေးအခေါ်များ Martech Zone
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 6, 2013 Douglas Karr
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ShortStack ၁၀၀.၄ ဘီလီယံကျော်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသောတက်ကြွသော Facebook စာမျက်နှာ ၅၀,၀၀၀ နှင့်စိတ်ကြိုက် Facebook စာမျက်နှာအက်ပလီကေးရှင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်နှင့်၎င်းတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာများအနက်မှ - ဒီဇင်ဘာလတွင်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာသည် ထုံးစံအတိုင်း Facebook Page app များပေါ်တွင်! ဒီဇင်ဘာလတွင် Facebook Page အက်ပလီကေးရှင်းများ အသုံးပြု၍ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်းသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အခြားအချက်အလက်များ -
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ၆၆% တိုးလာတယ် ပြိုင်ပွဲတင်ပြ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုံးစံ၌ 57% တိုးကြည့်ပါ Facebook Page app မျှဝေသည်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုံးစံ၌ 47% တိုးကြည့်ပါ Facebook စာမျက်နှာအက်ပ်အမြင်များ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ထုံးစံအရ Facebook တွင် ၃၃% တိုးလာသည် စာမျက်နှာ app သည်တိကျသော Facebook သူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေသည်
ဒါတွေအားလုံးဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်မှာဒီဟာကို ASAP လုပ်ရန်ရယူပါ။ Marketing Tech ဘလော့ဂ်ဖတ်သူများ - အားသာချက်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော link ကိုသုံးပါ သင်၏ ShortStack အကောင့်ကိုအခမဲ့စတင်ပါ!
Tags: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲFacebook အားလပ်ရက်ပြိုင်ပွဲရေတိုအတိုပြိုင်ပွဲ